Imixholo Yomtshato Wasebusika - Umtshato Decoration
Imixholo Yomtshato Wasebusika
Imitshato yaseWondland yaseWondland inokuba ntle.
Imixholo yomtshato wasebusika inokuba mihle kwaye intle, kodwa kungabi njalo. Zininzi imixholo eyonwabisayo yamaxesha abatshatileyo abanokukhetha ukuba baceba ukubhiyozela umtshato wabo ngexesha lekhephu.
Ikrisimesi ibhiyozelwa njani eMexico
Izimvo zemixholo yomtshato wasebusika
Ukukhetha umxholo olungileyo kuya kukuvumela ukuba uququzelele imihlobiso, indawo emileyo yomtshato, isinxibo, imibala, kunye nezinye izinto zomtshato wakho kwisiganeko esifanelweyo esiya kuba mnandi, sikhumbuleke kwaye sihle. Ngethamsanqa, zininzi imixholo ebalaseleyo yasebusika enokuthi ibe yeyakho ngokulula.
Krisimesi : Umxholo weKrisimesi okanye weholide ngowona uqhelekileyo kwimitshato yasebusika. Izambatho ezibomvu neziluhlaza, imifanekiso ka-Mnu no-Nksz Claus, imihombiso yokuhomba, kunye nemithi ekhanyisiweyo zizinto ezithandwayo kumxholo womtshato weKrisimesi.
Luhlaza okwesibhakabhaka : Yamkela into yakho eluhlaza okwesibhakabhaka ngomxholo womtshato ohlaza okwesibhakabhaka. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nesilivere yindibaniselwano entle yemibala, kunye nokuqaqamba kwekristale kwimihlobiso yomtshato kunokongeza ubukhazikhazi kunye nobukhazikhazi kulo mxholo womtshato.
Umtshato omhlophe Ukukhetha yonke imitshato emhlophe ilungele ubusika xa umhlaba ngokwawo uza kulungelelanisa nomxholo. Iimpahla ezimhlophe zabamolokazana kunye ne-tuxedos, ikhekhe lomtshato elimhlophe, kunye ne-bouquet emhlophe yomtshato omhlophe ziinkcukacha ezimangalisayo zalo mxholo ulula.
Ubusika Wonderland Abantu abatshatileyo banokubhiyozela umanyano lwabo kummangaliso wasebusika ukuba bakhetha imihombiso yekhephu kunye neempawu zomkhenkce.
Imidlalo yasebusika Isibini esineembaleki sinokukhetha ukuskiya, ukuskiya emkhenkceni, okanye umxholo womtshato webhola ekhephu ukubonisa ubuntu babo, kulandelwe ikhefu lomtshato labasandul 'ukutshata kwindawo yokhenketho okanye enye indawo ebusika.
UJack Frost : Lo mxholo womtshato ujolise kwiifiriyisi zasebusika kunye neemilo ezimnandi zomkhenkce ezongeza uburharha kwixesha elibandayo.
IRoyal Russia : Imitshato yamakhosazana inokwenzeka ebusika xa izibini zikhetha umxholo wasebukhosini womtshato waseRashiya. Isinxibo somtshato waseCinderella, uboya obumhlophe, kunye nemenyu ephefumlelweyo yaseRussia inokwenza umxholo ophuphayo ube yinyani.
iintsimbi ezijingayo : Endaweni yeentsimbi zomtshato zakudala, izibini zinokongeza ukujika kwamaxesha ngokukhetha iintsimbi zomculo njengomxholo wazo womtshato. Ukuhonjiswa kweBell kunye neenzuzo kulula ukuzifumana kwasekuqaleni kobusika kwaye kuyilo lokuyila, lokuzonwabisa.
Izilwanyana zasebusika Olunye ukhetho lwewimsical kwimixholo yomtshato wasebusika kukukhetha izilwanyana zasebusika njengendawo ekugxilwe kuyo. Iibhere ezimhlophe, iiphengwini, kunye neebhokhwe zizinto ezikhethiweyo kwaye zifumaneka kwii-cake toppers kunye nezinye izinto zokuzonwabisa.
IPoinsettia Umxholo womtshato we-poinsettia olula lukhetho oluhle kwaye olunemibala kwimitshato yasebusika. Ifumaneka ngemibala emininzi, ii-poinsettias zizityalo ezithandekayo ezongeza umbono weholide kuyo nayiphi na imitshato yasebusika. Umtshakazi unokuphatha i-poinsettia bouquet kwaye ezi ntyatyambo zenza iindawo eziphambili.
Unyaka Omtsha : U-Eva woNyaka oMtsha ngumhla othandwayo womtshato wasebusika, kwaye izibini zinokongeza umxholo wokubala kumtshato wabo ngeewotshi ezahlukeneyo, belahla ibhola yabo enekristale, okanye babelane ngomtshato womtshato umnqwazi kunye neendwendwe zabo.
Usuku lwezithandani : Le holide yasebusika yenye yeentsuku zomtshato ezithandwayo. Umxholo womtshato woSuku lweValentine unokwamkela intliziyo okanye ikerubhi motif, iiroses ezibomvu okanye ezipinki, iilekese ezingathandekiyo, okanye olunye uphawu loSuku lweValentine.
Imihlobiso yoMtshato wasebusika
Iibhokisi zeKhekhe zoMtshato eziLwandle
Iingcebiso Zomxholo Wasebusika
Imixholo yasebusika inokuba mnandi ekucwangciseni nasekuhombiseni, kwaye iinkcukacha ezincinci zomtshato odityanisiweyo zinokwenza ukuba ukhumbuleke ngakumbi.
Khetha ii-accents zekristale kwisinxibo somtshato kunye nokuhombisa ukulinganisa ukubengezela kwekhephu kunye nomkhenkce.
Cinga ngemifanekiso eqingqiweyo yomkhenkce, izitya, okanye iivazi njengenxalenye yemihombiso yomtshato.
Hlela isleigh njengezothutho phakathi komsitho womtshato kunye neendawo zokwamkela.
Nika iindwendwe zakho iziphuzo ezifudumeleyo ezifana necocoa, i-eggnog eshushu, i-spider cider, i-mulled wine, okanye ii-coffees ezingaqhelekanga.
Khetha ubumnandi bomtshato wasebusika obufana neelekese, imittens, imihombiso, okanye ezinye iiteki zonyaka.
Khetha ikhekhe lomtshato opholileyo we-mint okanye itshokholethi emhlophe emhlopheumtshato womtshatonjengonyango olumnandi.
Ngelixa iinkcukacha zokuhombisa zibalulekile kumtshato wasebusika, qiniseka ukubakho kwintuthuzelo kunye nokhuseleko lwakho kunye neendwendwe zakho ngokunjalo.
unxiba njani kwinkonzo yesikhumbuzo
Khetha ilokhwe yomtshato wasebusika kunye nelokhwe yomtshato elungele ixesha lonyaka elinobunzima, amalaphu ashushu kunye nemikhono emide.
Khetha izihlangu zomtshato ezikhuselekileyo ekuya kuba lula ukuhamba kuzo ngendlela ezinomkhenkce kunye nezinyuko.
Yenza itsheki yengubo ekhoyo kwiindwendwe zakho zomtshato ukuze iimpahla zazo zangaphandle zigcinwe zikhuselekile ngexesha lomsitho nolwamkelo.
Qiniseka ukuba zonke izitampu, izinyuko, iindledlana zendlela, kunye neendlela zicocekile kwaye azicacanga ngumkhenkce ngaphambi komtshato, kwaye umntu othile makazitshekishe ngamaxesha athile ngexesha lokwamkela ukuqinisekisa ukuba azikhohlisi.
Yazi ukuba imozulu ebusika engalindelekanga inokudala umonakalo kwizicwangciso zokuhamba kwaye ibe nokuguquguquka okunokwenzeka kunye neenkcukacha zomtshato wakho.
Imixholo yomtshato wasebusika isusela kwizinto ezilula nezintle neziya kubumnandi nobumnandi. Nawuphi na umxholo owukhethayo, ngokuwusebenzisa ukulungelelanisa inkangeleko yomtshato wakho uya kuba nomsitho omhle nongenakulibaleka oya kuthi uyifudumise intliziyo yakho ngokuthandana nokuba ubushushu bungaphandle na.
Intloko Abafazi Ifashoniimifanekiso Ikhonkco Umculo Genres Ikampu Expert Interviews
onke ama-50 athi ngolandelelwano lwealfabhethi
inja iphefumla ngokukhawuleza kodwa isebenza ngendlela eqhelekileyo
ingaba unayo impungutye njengesilwanyana sasekhaya
Umfazi wam wandishiya kodwa ndisamthanda
Umdlalo ofanelekileyo kumfazi we-scorpio